निजगढ नगरपालिकामा मेयरको आकाङ्क्षी को को ? – Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
निजगढमा चिसो बढे संगै दाउरा वितरण
सुर्यको सयौ चोटमा युभाषले यस्तो गरे
नेपाली सेनाले डरलाग्दो भिर पाखामा पनि जोखिम मोल्दै यसरी सडक बनाउदै छन(भिडियो)
सेवा वचतको चौथो साधारण सभा सम्पन्न
आधा लाख कटाएर चुनाव जित्ने ‘टप फाइभ’ नेता
प्रत्यक्षतर्फ वाम गठवन्धनको दुई तिहाई बहुमत
Home / स्थानिय समाचार / निजगढ नगरपालिकामा मेयरको आकाङ्क्षी को को ?
Posted by: Nijgadh.com in स्थानिय समाचार २०७४, ८ बैशाख शुक्रबार ००:३७	Comments Off on निजगढ नगरपालिकामा मेयरको आकाङ्क्षी को को ? 1,037 Views
वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले यतिबेला देशै चुनावमय भएको छ । गाउँटोल चोकचौतारो सबैतिर चुनावी माहोलले एकाएक तातेको छ । सबैतिर चुनावी बहससँगै राजनैतिक क्रियाकलापहरुले पनि तिब्रता पाएको छ । करिब १९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निजगढको मेयर पदका लागि राजनीतिक दलहरुभित्र आन्तरिक प्रतिष्पर्धा तीब्र भई रहेका छन् ।
निजगढ नगरपालिकाको ३५ हजार जनसङ्ख्याको नेतृत्व गर्न स्थानीय प्रमुख दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले पछिल्लो समयमा चुनावी क्रियाकलाप तिब्र बनाएको छ । उनीहरुले मेयर पदको महत्व र गरिमालाई अझ बढी उचाईमा पुर्याएका छन् । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनसक्ने ‘लोकप्रिय’ र नेतृत्व गर्न सक्षम व्यक्तिको खोजीमा दलहरु आन्तरिक रुपमा लागिपरेका छन् ।
को को छ न त एमालेमा ?
नेकपा एमाले तर्फबाट मेयरमा अहिले सुरथ पुरी र एक बहादुर श्रेष्ठको नाम एमालेमा बढि चर्चामा छ । पूर्व गाविस अध्यक्षसमेत रहेका एकबहादुर श्रेष्ठ, युवा नेता सुरथ पुरी, नारायण खड्का, दिलबहादुर लामा लगायतका नाम चर्चामा छन् । तर उनीहरुले आफ्नो उम्मेद्वारीबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।
को को छ न त नेपाली कांग्रेसबाट ?
नेपाली कांग्रेसबाट करिब १ दर्जन नेताको नाम चर्चामा रहेको छ । चर्चाअनुसार सुरेश खनाल, पेमा सिद्धी लामा, किशोर नेपाल, नवराज तिमल्सिना लगायतका छन् । त्यसैगरी २०७० सालमा दोश्रो संविधानसभाका प्रत्याक्षी शम्भुबहादुर बुढाथोकीको नामसमेत चर्चामा छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा ?
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मेयर पदका लागि वडाहरुबाट नामावली सङ्कलन गरिरहेको छ । मेयरको लागि वेनिबहादुर लामाको नाम चर्चामा छ ।
राप्रपाले अन्य दलको उम्मेदवारहरूको अाधारमा अाफ्ना उम्मेदवार उठाउने भने पनि भित्री रूपमा उम्मेदवार तय गरिसकेको छ । राप्रपामा शिवप्रसाद तिमल्सिना, बासुदेव तिमल्सिना लगायतका अाकाङ्क्षी मेयरको मैदानमा उत्रन तयार देखिन्छ ।
featured	२०७४, ८ बैशाख शुक्रबार ००:३७
Previous: यती डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको टागिया बस्तीमा बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
Next: शहिदचोक सडकको काम सुस्त यात्रु र स्थानीयलाई सास्ती
२०७४, ३० पुष आईतवार ०७:४७
२०७४, ३० पुष आईतवार ०७:४४
२०७४, २८ पुष शुक्रबार ०३:२४
२०७४, १७ पुष सोमबार १५:०८
०८ माघ २०७४
२०७४, १ माघ सोमबार ०६:१७
२०७४, २२ पुष शनिबार १३:३६
२०७४, १६ पुष आईतवार १५:१८
२०७४, २६ मंसिर मंगलवार ०३:५३
२०७४, २५ मंसिर सोमबार १४:०७
२०७४, २५ मंसिर सोमबार १४:०३